အရေးအကြောင်းအလွတ်ကင်းဝတ်စုံ | Martech Zone
Wisconsin၊ Milwaukee ရှိဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းတွင်ကျွန်ုပ်ထိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်မနက်ဖြန်ဒီမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတင်ပြပြီး Indianapolis ကိုပြန်သွားသည်။ ငါခရီးစဉ်အတွက်ဝတ်စုံအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်။ အဲဒါဟာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျှော့ချပြီးရောင်းလို့မရဘူး။ ၎င်းသည်ချောကလက်အညိုရောင် - အနက်ရောင်နီးပါးနှင့်အတော်လေးအဆင်ပြေသည်။ နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာဝတ်စုံကိုမ ၀ ယ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဖိနပ်စီးတာအပါအ ၀ င်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဝတ်အစားတစ်ခုလုံးနဲ့ငါဆက်ဆံခဲ့တယ်။
Midway လေဆိပ်မှာအခြားခရီးသည်တစ်ယောက်နဲ့စကားစမြည်ပြောပြီးကျွန်တော့်ဝတ်စုံကိုကျွန်တော့်လက်ကိုင်အိတ်ထဲထည့်ထားတာကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အိတ်ထဲမှာဝတ်စုံတစ်စုံရှိတယ်လို့ကောင်လေးကမယုံနိုင်ဘူး။
တကယ်တော့ငါ၌ငါ့ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးရှိခဲ့ပါတယ် Messenger ကိုအိတ် - အဝတ်လဲခြင်း၊ လက်ပ်တော့ပ်၊ မဂ္ဂဇင်းစသည်တို့ကိုလဲလှယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂျင်းဘောင်းဘီများနှင့်စားဆင်ယင်ဖိနပ်စီးထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ခရီးသွား like ည့်သည်တစ်ယောက်လိုဖြစ်နေသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လို့လုံခြုံရေးကိုမြန်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ The ဖြစ်ရပ်မှန် Logic Messenger ကိုအိတ် ငါ့မှာ MacBookPro နဲ့အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့နောက်ဘက်အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လက်ပ်တော့ပ်ကို ၀ င်ဖို့အတွက်ငါထုပ်ပိုးတာကိုအနှောင့်အယှက်မပေးသင့်ဘူး။
ငါဒင်းဗားမှာနေတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကဝတ်စုံတစ်ထည်ကိုဘယ်လိုလှန်ရမယ်ဆိုတာပြတဲ့နေရာမှာအရေးအကြောင်းမရှိတာကိုပြခဲ့တယ်။ ရိုးရာအစဉ်အလာအရအဝတ်အစားအိတ်ကြီးတစ်ခုကိုယူဆောင်လာပြီးခေါက်လိုက်ကြသည်။ ပြproblemနာကအထည်အိတ်ကိုခေါက်ပြီးချုပ်လိုက်ရင်အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ သင်ဝတ်စုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖွင့်ထားရင်သင်ဟာအရေးအကြောင်းတွေလုံးဝမရှိဘဲအကုန်လုံးနီးပါးထည့်လို့ရပါတယ်။
ငါကလူကြီးတစ်ယောက်ပါ၊ ဒီတော့မင်းဘယ်လောက်ဝတ်ရမလဲဆိုတာစိတ်ကူးကြည့်လို့ရတယ် သင့် ငါနှင့်အတူယူပါ
မင်းဘောင်းဘီကိုလှိမ့်ဖို့ဘောင်းဘီတွေကိုသူတို့ဘေးမှာရှိတဲ့ဘောင်းဘီတွေနဲ့ချထားတယ်။ ဘောင်းဘီတွေကပြည့်စုံတယ်။ ခါးမှစတင်ကာဘောင်းဘီကိုကောင်းမွန်စွာလိမ်းပြီးသည်အထိသေသပ်စွာလှိမ့်ပါ။ သူတို့ကိုလွယ်အိတ်ထဲ၌ထည့်။ အိတ်ကပ်ထဲထည့်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီကိုလှိမ့်လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးပိုကြိုက်ပါတယ်။ သငျသညျညင်ညင်သာသာကွေးချင်, ခေါက်မယ့် :), သင်၏ဂျာကင်အင်္ကျီဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိဖို့ပခုံးကိုပြန်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဤနည်းဖြင့်မည်သည့်ခြံသည်နောက်ကျောအလယ်တွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသဘာဝကျသည်။ အင်္ကျီလက်တစ်ဖက်ကိုလက်များကိုထောင့်မှန်အတိုင်းထားပါ။ သူတို့ကိုကွေးနေသလောက်မခေါက်ချင်ဘူး။ လက်အဆုံးသည်ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်ရှိအောက်ခြေခလုတ်အောက်သို့တက်သွားသင့်သည်။
ပခုံးပေါ်ကနေစပြီးပတ်ပတ်လည်ကိုလှိမ့်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်သွားတဲ့အခါမှာအဲဒါကိုမတွန့်မနပ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဘောင်းဘီထက်ပိုထူသောလိပ်တစ်မျိုးဖြစ်သင့်သော်လည်းခရီးသွားရာတွင်ကောင်းမွန်သည်။ အရာဝတ္ထုများကိုပတ် ၀ န်းကျင်အိတ်ထဲသို့မတင်ပါနှင့်၊ ထိပ်ပေါ်တွင်ခြေအိတ်များ၊ အင်္ကျီများစသည်တို့ဖြင့်ထားပါ။
သင် ဦး တည်ရာသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အိတ်ကိုဖြုတ်၊ ဝတ်စုံကိုဖွင့ ်၍ ဆွဲပါ။ သငျသညျပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေ၌တွေ့သင့်ပါတယ်! ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဓာတ်ပုံမရှိဘူး - တကယ်တော့ငါလမ်းပေါ်မှာဆဲလ်ဖုန်းကင်မရာကဖြတ်မသွားဘူး။
မှတ်ချက်။ ။ ငါက ၀ တ်စုံရှပ်အင်္ကျီတွေနဲ့ကံမကောင်းတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။
Tags: erik qualman ဖြစ်သည်ဟာသမိုဘိုင်း appမိုဘိုင်းဖော်ရွေမိုဘိုင်း optimizationမိုဘိုင်းဆိုဒ်များပျက်လုံးများအထောက်အထားအရည်အချင်းဆိုရှယ်မီဒီယာတော်လှန်ရေး
မတ်လ 6, 2008 မှာ 11: 43 AM
ပိုမိုကောင်းမွန်သော blogging သို့မဟုတ် WordPress application အတွက်အမျိုးမျိုးသောဝစ်ဂျက်များအကြောင်းထိုအကြံပြုချက်များကိုမေ့လိုက်ပါကဤသည်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်သောအသိပညာပင်! 🙂
မတ်လ 6, 2008 မှာ 1: 41 pm တွင်
Doug, ငါဖက်ရှင်နှင့်ဝတ်စုံကိုချစ်, သင်၏အသံ jazzy, ဘယ်လိုမထိုက်မတန်ဖြစ်သနည်း ငါလုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများရတယ်၊ ငါက 6ft2in နဲ့ 260 lbs ပေါ့။ သင်၏အလုပ်အကိုင်တွင်လူတစ် ဦး သည်စီးပွားရေးအတွက်သင့်လျော်သောဝတ်စုံ ၃ ခု၊ အပြာရောင်မီးတောက်ကြီး၊ တုတ်ကျင်း၊ မီးခိုးရောင်ပျော့ပျောင်းသောအနက်ရောင်နှင့်သင့်အတွက်ပူသောနေ့ရက်များအတွက်တင်ပါးဆုံရိုးဝတ်စုံရှိသင့်သည်။
မတ်လ 7, 2008 မှာ 6: 17 pm တွင်
အ ၀ တ်အထည်၌ကျွန်ုပ်အရသာသည် ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဘတ်ဂျက်ထက်များစွာပိုပါသည်။ JD! ဒီဝတ်စုံဟာအထူးသဖြင့်အဆင်မပြေဘူး။ ဒါကြောင့်ငါကချုပ်ချုပ်ဖို့လိုတယ်။ လက်တစ်လက်မလောက်ရှည်လျားပေမယ့်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကလှတယ်။ ငါပျင်းရိသည်ပိုးကြိုးလိုချင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏အခြားဝတ်စုံတွင်၎င်းနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီဟောင်းများထက် ပို၍ ၀ တ်ဆင်ရန် ပို၍ ကောင်းသည်။
မတ်လ 7, 2008 မှာ 5: 14 pm တွင်
စစ်သူရဲဟောင်း၊ ငါ, CA မှာအဲဒီမှာအဲဒီမှာတပ်စွဲခဲ့သူငါ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသွားရောက်လည်ပတ်သောအခါဤထုပ်ပိုးကျောက်မျက်သင်ယူခဲ့တယ်။ ငါအိမ်ကိုသွားဖို့ငါ့အိတ်ကိုထုပ်ပိုးလိုက်တာကသူကိုတကယ်စိတ်ဆိုးစေတယ်။ သူကကျွန်တော့်အဝတ်အစားအားလုံးကိုကိုင်ပြီးလှိမ့်လိုက်တယ်။ အဲဒါကငါယူခဲ့တဲ့အာကာသရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ ငါထင်တာကတော့စစ်တပ်ထဲမှာပဲငါသိတဲ့လူတွေပဲစစ်တပ်ထဲရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘဝမှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေငါကတည်းကအရာအားလုံးကိုလှိမ့်ခြင်းဖြင့်ခေါက်ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲငါ (ငါ့တည်ရှိမှု၏ bane နေသော) အဘယ်သူမျှမတွန့်နှင့်အတူရောက်ရှိနှင့်အခြားသန့်ရှင်းသောအရာများအတွက်နေရာအများကြီး။ သို့သော်ရှပ်အင်္ကျီများသည်အများအားဖြင့်သံနှင့်ထိတွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ကောင်းသော post နှင့်စီးပွားရေးသမားတစ် ဦး အဖြစ်ရှိသည်ဖို့အလွန်အဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်။
မတ်လ 7, 2008 မှာ 6: 22 pm တွင်
ငါအသက်ကြီးရင့်ရမယ်။ ငါ့နေ့က 'fold & stow' ပါ။ ငါတို့ဘာမှမလှိမ့်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုခေါက်သိမ်းထားတာတွေကများတယ်။ ငါ Boot စခန်းမှာလုပ်သလိုလက်သုတ်ပုဝါတွေခေါက်နေတုန်းပဲ။ ဝမ်းနည်းစရာ!
မတ်လ 8, 2008 မှာ 10: 08 pm တွင်
ဒီဝတ်စုံကိုလှိမ့်စမ်းကြည့်ပြီးအခုငါလုပ်တဲ့ဝတ်စုံကထက်ပိုကောင်းမလားကြည့်ပါ။ နောက်လှည့်ကွက် - ငါသူတို့ကိုအိပ်နေသလိုမျိုးသူတို့ကိုမလိုဘဲရှပ်အင်္ကျီတွေပို့ခြင်း။ အဲဒီအတွက်အကြံပေးချက်တွေရှိလား။
ဇွန် 28, 2008 မှာ 9: 42 pm တွင်
ငါမြေများကိုအဆုံးသတ်ထံမှသံမဏိရှပ်အင်္ကျီဝယ်သူတို့ကိုလှိမ့်။ အကယ်၍ အရေးအကြောင်းများသို့မဟုတ်တွန့်ခြင်းများရှိပါကသံတစ်ချက်ဖြင့်ပွတ်တိုက်ရုံဖြင့်လုံလောက်သည်။ ငါဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်တော့မယ်ဆိုတာသိရင်သံတောင်မပူတော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်ဝတ်စုံအကျီဝတ်ထားလျှင်မိနစ် ၃၀ အတွင်းထွက်လာသည်။
23:2009 pm မှာဇွန် 1, 21
နောက်တစ်နည်း - အကျီတစ်လက်ကိုဆွဲ။ အပြင်၌ပခုံးတစ်လုံးထားပါ။ အခြားလက်မောင်းကိုအတွင်းပိုင်းမှထွက်လက်မောင်းမှတဆင့်ထားပါ။ Shoulderpads များကို stack လုပ်သင့်သည်။ ထို့နောက်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုလှိမ့်ထားပါ။
Brooks ညီအစ်ကိုများသည်အရေးအကြောင်းများကင်းသောရှပ်အင်္ကျီများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အရေးမကြီးပါ။